Umsebenzi Wokwakha Uzukisa UYehova | UBukumkani BukaThixo
Umsebenzi wokwakha uhambisela phambili uBukumkani
1, 2. (a) Yintoni abakhonzi bakaYehova ababeyithanda kwakudala? (b) Yintoni eyona nto ixatyiswa nguYehova?
KWAKUDALA abakhonzi bakaYehova babekuthanda ukwakha izakhiwo ezizukisa igama lakhe. Ngokomzekelo, amaSirayeli ancedisa ngehlombe xa kwakusakhiwa umnquba, enikela ngezinto zokwakha kangangoko ayenako.—Eks. 35:30-35; 36:1, 4-7.
2 Ayizozinto zokwakha ezona zizukisa uYehova, futhi akaziboni njengezona zinto zibalulekileyo. (Mat. 23:16, 17) Eyona nto uYehova ayixabisayo, esona sipho simzukisayo, kukunqulwa ngabantu bakhe, nendlela abazinikele ngayo emsebenzini ngokuzithandela. (Eks. 35:21; Marko 12:41-44; 1 Tim. 6:17-19) Loo nto ibaluleke kakhulu. Kutheni sisitsho nje? Kuba izakhiwo zibakho ziphinde zidilike. Ngokomzekelo, uphi umnquba netempile namhlanje? Nakuba ezo zakhiwo zingasekho, uYehova akakawulibali umsebenzi owenziwa ngabakhonzi bakhe, neminikelo abayenzayo xa zazisakhiwa.—Funda eyoku-1 kwabaseKorinte 15:58; amaHebhere 6:10.
3. Siza kuthetha ngantoni kwesi sahluko?
3 Nabakhonzi bakaYehova namhlanje basebenze nzima besakha iindawo zokumnqula. Kwaye oko siye sakuphumeza, sithunywe nguKumkani wethu uYesu Kristu, kuyamangalisa ngokwenene! Ngokucacileyo, uYehova uye wayisikelela imizamo yethu. (INdu. 127:1) Kwesi sahluko siza kuthetha ngeminye yemisebenzi eye yenziwa nendlela emzukise ngayo uYehova. Siza kuva nakwabanye abaye bayenza le misebenzi.
4. (a) Kutheni sifuna iindawo ezingakumbi zokunqula? (b) Kutheni ezinye iiofisi zesebe ziye zavalwa? (Funda ibhokisi ethi “ Utshintsho Olwenziwa Kulwakhiwo Lwamasebe.”)
4 Njengokuba besesifundile kwiSahluko 16, uYehova ufuna sihlanganisane ukuze simnqule. (Heb. 10:25) Iintlanganiso zethu azipheleli nje ekomelezeni ukholo lwethu, zikwasinceda siwuthande ngakumbi umsebenzi wokushumayela. Njengokuba singena nzulu kwimihla yokugqibela, uYehova uyawukhawulezisa umsebenzi. Ngenxa yoko, amakhulu amawaka ayathontelana ukungena kwintlangano yakhe nyaka ngamnye. (Isa. 60:22) Ngokuya besanda abalawulwa boBukumkani, kuya kusanda nemfuneko yezakhiwo zokuprinta iincwadi ezisekelwe eBhayibhileni neendawo zokunqula.
5. Kutheni igama elithi iHolo yoBukumkani lifanelekile nje? (Funda nebhokisi ethi “ The New Light Church [Icawa Yokukhanya].”)
5 Ekuqaleni kwembali yakutshanje yabantu bakaYehova, aBafundi BeBhayibhile babona imfuneko yokuba neendawo ezizezabo zokunqula. Kubonakala ukuba enye yeendawo zokuqala zokunqula yakhiwa eWest Virginia, eMerika, ngo-1890. Kwathi kusiba ngoo-1930, abantu bakaYehova babe sele bakhe okanye behlaziye iiholo ezininzi, kodwa ezi holo zazingekabi nagama ezibizwa ngalo. Ngo-1935, uMzalwan’ uRutherford watyelela eHawaii, apho kwakusakhiwa iholo kunye neofisi yesebe. Xa wabuzwa ukuba ucinga ukuba esi sakhiwo sibizwe ntoni, waphendula wathi: “Kunganjani xa sinokusibiza ‘iHolo yoBukumkani,’ andithi yile nto siyenzayo leyo, sishumayela ngoBukumkani?” (Mat. 24:14) Kwathi kanti yayingazi kuba yiloo holo kuphela eyayiza kubizwa ngelo gama, kodwa phantse zonke iindawo abahlanganisana kuzo abantu bakaYehova emhlabeni wonke zibizwa njalo.
ABafundi BeBhayibhile phambi kwecawa iNew Light
THE NEW LIGHT CHURCH [ICAWA YOKUKHANYA]
NGASEKUPHELENI kweminyaka yoo-1880, amarhamente amaninzi ecawa yamaBhaptizi eMount Lookout, eWest Virginia, aba ngaBafundi BeBhayibhile. Iintlanganiso babeziqhubela kwicawa yamaBhaptizi. Kubonakala ngathi le cawa yayisetyenziswa liqela elifike kuqala. Kodwa ke ngo-1890, abazalwana bayeka ukungenela kule cawa ibe babesele bezakhele iholo yabo.
Le holo iphakathi kwezokuqala ezakhiwa ngabantu bakaYehova bale mihla. Yayibizwa ngokuba yiNew Light kuba aBafundi BeBhayibhile babefundisa iinyaniso ezikhanyisayo ezisuka eZibhalweni. Le holo yasetyenziswa de yayiminyaka yoo-1920. UMzalwan’ uA. H. Macmillan nabanye abazalwana ababehambela amabandla babedlalela i-“Photo-Drama of Creation” kule cawa.
6, 7. Yintoni eyenziwe ziiHolo zoBukumkani ezakhiwa ngokukhawuleza?
6 Kwathi kusiba ngoo-1970, imfuneko yeeHolo zoBukumkani yaya isanda ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, abazalwana baseMerika beza nendlela yokwakha iiHolo ezintle ngeentsuku nje ezimbalwa. Kwathi kusiba ngu-1983, kwabe sekwakhiwe iiHolo zoBukumkani ezinjalo ezimalunga neziyi-200 eMerika naseKhanada. Ukuze wenziwe kakuhle lo msebenzi, abazalwana bayila iikomiti zokwakha zenqila. Eli lungiselelo laba yimpumelelo kangangokuba ngo-1986, iQumrhu Elilawulayo lalimisela ngokupheleleyo, ngo-1987, kwakusele kukho iiKomiti Zokwakha Zenqila eziyi-60 eMerika. * Kwathi kusiba ngu-1992, zabe iiKomiti Zokwakha Zenqila zimiselwe eArgentina, eFransi, eJamani, eJapan, eMexico, eMzantsi Afrika, eOstreliya, naseSpeyin. Simele sibaxhase kangangoko aba bazalwana bakha iiHolo zoBukumkani nezeeNdibano, kuba nabo benza umsebenzi ongcwele.
7 Ezi Holo zoBukumkani zakhiwa ngokukhawuleza ziye ngandlel’ ithile zashumayela kwezo ndawo zakhiwa kuzo. Ngokomzekelo, elinye iphephandaba laseSpeyin lalinomxholo othi, “Ukholo Lususa Iintaba.” Lithetha ngolwakhiwo lweHolo yoBukumkani ekwidolophu yaseMartos, labuza: “Kunokwenzeka njani, ukuba kweli hlabathi linokuzingca, kusuke amatsha-ntliziyo kwimimandla eyahlukeneyo [yaseSpeyin] ngokungazingci ahambele eMartos ukuya kwakha esona sakhiwo sakhiwe ngokukhawuleza, ngokugqibeleleyo nangokulungeleleneyo?” Eli nqaku lawuphendula lo mbuzo ngamazwi elinye iNgqina elilitsha-ntliziyo: “Impendulo inye, kungokuba sifundiswa nguYehova.”
UTSHINTSHO OLWENZIWA KULWAKHIWO LWAMASEBE
Kwakhiwa esinye sezakhiwo zokuqala zokuprinta eBrooklyn, ngo-1927
NJENGOKO umsebenzi wokushumayela ngoBukumkani wawusiya unwenwa, kwasekwa iiofisi zamasebe kumazwe ahlukahlukeneyo. Eyokuqala yayiseBritani ngo-1900; eyesibini iseJamani ngo-1903 yaye eyesithathu yayiseOstreliya ngo-1904. Uncwadi lwethu lwafuneka nangakumbi, ngoko kwafuneka kwandiswe izakhiwo zokuprinta. Esinye sezakhiwo zokuqala esasinemigangatho esibhozo sakhiwa ngo-1927, eBrooklyn, eNew York. Kuthe kubetha unyaka ka-2013, zabe iiBhayibhile, iincwadi neemagazini ziprintwa ngamasebe ayi-15.
IBheteli yasePapua New Guinea, eyanikezelwa ngo-2010
Ukususela kwiminyaka yoo-1970 ukuya kutsho ekuqaleni koo-1990, kuye kwakhiwa iiofisi zamasebe kumazwe amalunga nayi-60. Kuye kwandiswa iiofisi zamasebe kwamanye amazwe ayi-30. Kutshanje, iiofisi zamasebe eziliqela ziye zavalwa. Ezinye zezizathu zibhalwe kwiNcwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2013, apho ithi: “Indlela ubugcisa bokuprinta obuhambele phambili ngayo iye yabangela ukuba amasebe amakhulu anciphise abasebenzi. Ngenxa yokuba bembalwa abantu abasebenza kumasebe amakhulu, kuye kwavuleka amagumbi okuhlala abo bebesebenza kumasebe amancinane akwamanye amazwe. Ngoku umsebenzi wokufundisa iBhayibhile wenziwa ngamaNgqina anamava kula masebe makhulu.”
Ukwakha Kumazwe Angathathi Ntweni
8. Yintoni elavumayo ukuba yenziwe ngo-1999 iQumrhu Elilawulayo, yaye ngoba?
8 Ngasekupheleni kweminyaka yoo-1900 abantu abakumazwe apho abazalwana bengathathi ntweni baye bathontelana ukungena kwintlangano kaYehova. Amabandla asekuhlaleni enza konke okusemandleni awo ukuze akhe iindawo zokuhlanganisana. Kodwa kwezinye iindawo abazalwana baye banyamezela ukugezelwa nokuhlekwa ngenxa yokuba iiHolo zoBukumkani zawo zasekuhlaleni zazikumgangatho ophantsi xa zithelekiswa nezinye iindawo zonqulo. Kusenjalo, ukususela ngo-1999, iQumrhu Elilawulayo lavuma ukuba kuqaliswe iphulo lokwakha iiHolo zoBukumkani ngokukhawuleza kumazwe asakhasayo. Kwasetyenziswa imali esuka kumazwe afumileyo ukuze kwakhiwe iiHolo zoBukumkani ezikumgangatho ofanayo. (Funda eye-2 KwabaseKorinte 8:13-15.) Abazalwana noodade abasuka kwamanye amazwe baba ngamatsha-ntliziyo ukuze bancedise kulo msebenzi.
9. Nguwuphi umsebenzi owawungathi mninzi kakhulu, kodwa kuye kwafezwa ntoni?
9 Ekuqaleni, kwakungathi lo msebenzi mninzi kakhulu. Ingxelo eyanikelwa ngo-2001 yabonisa ukuba kwakusafuneka iiHolo zoBukumkani ezingaphezu kwe-18 300 kumazwe asakhasayo ayi-88. Xa sixhaswa ngumoya oyingcwele kaThixo noKumkani wethu uYesu Kristu, awukho umsebenzi ongenakwenziwa. (Mat. 19:26) Kwiminyaka emalunga neyi-15, ukususela ngo-1999 ukuya ku-2013, kweli phulo abantu bakaThixo sele bakhe iiHolo zoBukumkani eziyi-26 849. * UYehova usaqhubeka ewusikelela umsebenzi wokushumayela, kangangokuba ngo-2013 kwakufuneka iiHolo zoBukumkani ezimalunga ne-6 500 kula mazwe, yaye ngoku, nyaka ngamnye kufuneka amakhulukhulu azo.
Ukwakha iiHolo zoBukumkani kumazwe angathathi-ntweni kuneengxaki zako
10-12. Ukwakhiwa kweeHolo zoBukumkani kuye kwalizukisa njani igama likaYehova?
10 Ukwakhiwa kwezi Holo zoBukumkani kuye kwalizukisa njani igama likaYehova? Ingxelo esuka kwiofisi yesebe yaseZimbabwe yathi: “Kuthi kungekapheli nenyanga enye sineHolo yoBukumkani entsha, inani labantu abezayo kwiintlanganiso liphindaphindeke kabini.” Kubonakala ukuba kumazwe amaninzi, abantu ababi namdla ncam wokuza kuhlanganisana nathi, de sibe nendawo efanelekileyo yokunqula. Kodwa xa kuye kwakhiwa iHolo yoBukumkani entsha, iye igcwale msinyane, kube sekufuneka enye. Sekunjalo, ayisosakhiwo nje kuphela esitsalela abantu kuYehova. Uthando lokwenene lobuKristu abalubona kwabo bakhayo, luyayitshintsha indlela abayijonga ngayo intlangano yakhe. Khawuve le mizekelo imbalwa.
11 EIndonesia. Xa enye indoda eyayibukele kusakhiwa iHolo yoBukumkani yeva ukuba akukho namnye owayeqeshiwe apha yathi: “Yazi nina, ningabantu abamangalisayo nyhani! Oko ndinibukeIe, ngamnye wenu uzijul’ ijacu, kwaye nonwabile nakuba nje ningazukubhatalwa. Andiqondi ukuba ikhona intlangano yonqulo enjengeyenu!”
12 EUkraine. Elinye ibhinqa elalidlula ntsasa nganye apho kwakusakhiwa iHolo yoBukumkani laqiniseka ukuba abo basebenzi yayingamaNgqina kaYehova, kwaye eso sakhiwo sasiyiHolo yoBukumkani. Lathi: “Ndandikhe ndeva ngamaNgqina kaYehova ngodadewethu owaba lilo. Xa ndabona kusenziwa lo msebenzi, ndagqiba kwelokuba nam ndifuna ukuba lilungu lale ntsapho kuba ndabona uthando olwalulapho.” Eli bhinqa lavuma ukufundelwa iBhayibhile, laza ngo-2010 labhaptizwa.
13, 14. (a) Yintoni oye wayifunda wena kwinto eyenziwa sisibini esitshatileyo emva kokuba sibukele ukwakhiwa kweHolo yoBukumkani? (b) Yintoni onokuyenza ukuze iHolo yenu yoBukumkani izise uzuko kuYehova?
13 EArgentina. Esinye isibini esitshatileyo saya kumzalwana owayevelela umsebenzi wokwakha iHolo yoBukumkani. Umyeni wathi: “Sekulithuba sinibukele nisenza lo msebenzi, kwaye . . . sigqibe kwelokuba sifuna ukufunda ngoThixo kwesi sakhiwo.” Emva koko wabuza, “Simele senze ntoni ukuze nathi size kwiintlanganiso?” Esi sibini savuma ukufundelwa iBhayibhile, kodwa sathi sivuma kuphela ukuba kuza kufundelwa intsapho yonke. Abazalwana bakuvuyela oko.
14 Kusenokwenzeka ukuba awuzange ulifumane ithuba lokuncedisa xa kwakusakhiwa iHolo yenu yoBukumkani, kodwa usenokuncedisa ekubeni izise uzuko kwigama likaYehova. Ngokomzekelo, ungamema izifundo zakho zeBhayibhile, amabuyelo, kunye nabanye abantu ukuba beze kwintlanganiso kwiHolo yoBukumkani. Unalo nethuba lokucoca nokulungisa indawo yenu yokunqula. Xa ucebe kakuhle, usenokukwazi nokunikela ukuze uncedise ngeendleko zokuyinyamekela, okanye ukuze kwakhiwe ezinye ezifana nayo kwamanye amazwe. (Funda eyoku-1 KwabaseKorinte 16:2.) Zonke ezi zinto zizisa indumiso kwigama likaYehova.
Abasebenzi ‘Baya Kuzinikela Ngokuvumayo’
15-17. (a) Ngoobani abenza umsebenzi omninzi xa kusakhiwa? (b) Ufunde ntoni wena kwinto eyathethwa zizibini ezitshatileyo eziye zayokwakha kwamanye amazwe?
15 Umsebenzi omninzi xa kusakhiwa iiHolo zoBukumkani, iiHolo zeNdibano nezakhiwo zesebe wenziwa ngabazalwana noodade basekuhlaleni. Kodwa amaxesha amaninzi bancediswa ngabazalwana noodade abasuka kwamanye amazwe abaziincutshe kumsebenzi wokwakha. Abanye baba bazalwana noodade baye bahlengahlengisa ubomi babo ukuze bakwazi ukuncedisa kumazwe ngamazwe kangangeeveki eziliqela, ukanti abanye basebenza kuloo mazwe kangangeminyaka, bekwizabelo zokwakha ezahlukahlukeneyo.
UTimo noLina Lappalainen (Funda isiqendu 16)
16 Umsebenzi wokwakha owenziwa zwenibanzi uza neengxaki zawo kodwa uneentsikelelo ezanelisayo. Khawuve ngomzekelo kaTimo noLina, abaye bayokwakha iiHolo zoBukumkani neeofisi zesebe kumazwe aseAsia, eYurophu, naseMzantsi Merika. UTimo uthi, “Kule minyaka iyi-30 idluleyo besiye sitshintshwe isabelo malunga neminyaka emibini.” ULina, owatshata uTimo kwiminyaka eyi-25 eyadlulayo, uthi: “Ndiye ndasebenza noTimo kumazwe awahlukahlukeneyo alishumi. Akuyondlwan’ iyanetha ukufunda ulwimi olutsha, ukuqhelana nemozulu entsha, ukutya ukutya ongakuqhelanga, nokuqala abahlobo abatsha.” * Ngaba umzamo wabo wazala amaduna namathokazi? ULina wongeza ngelithi: “Ezo ngxaki ziye zazala iintsikelelo. Siye safumana uthando nobubele kubazalwana bethu, saza saziva sikhathalelwe nguYehova. Siye sakubona kuzaliseka oko uYesu wakuthembisa abafundi bakhe kuMarko 10:29, 30. Siye safumana inkitha yoobhuti, oosisi, noomama abathanda uYehova.” UTimo uthi, “Ukusebenzisa ubuchule esinabo ukuze sifeze eyona njongo ibalulekileyo, ukwandisa impahla kaKumkani, kusenza sizive saneliseke ngokwenene.”
17 UDarren noSarah, abaye bancedisa kumsebenzi wokwakha eAfrika, eAsia, kuMbindi Merika, kuMzantsi Merika, kuMzantsi Pasifiki, naseYurophu baziva ngathi baye bafumana ngaphezu kokuba bebenikele. Ejonga ngaphaya kwengxaki ababenazo, uDarren uthi: “Kube lilungelo elikhulu ukusebenza nabazalwana abasuka kwiindawo ezahlukahlukeneyo zomhlaba. Ndiye ndabona ukuba uthando esinalo ngoYehova lusenza sibe yimbumba yamanyama.” USarah uthi: “Ndiye ndafunda izinto ezininzi kakhulu kubazalwana noodade abasuka kwiimvelaphi ezahlukahlukeneyo! Ukubona izinto abazincamayo ukuze bakhonze uYehova kundikhuthaza ukuba ndizinikele ngakumbi.”
18. Amazwi esiprofeto akwiNdumiso 110:1-3 aye azalisekiswa njani?
18 UKumkani uDavide waprofeta ukuba nakuba abalawulwa boBukumkani bukaThixo beya kufumana iingxaki, baya “kuzinikela ngokuvumayo” ukuze bafeze iinjongo zoBukumkani. (Funda iNdumiso 110:1-3.) Bonke abo bancedisayo kumsebenzi wokwakha oxhasa uBukumkani bazalisekisa kanye loo mazwi esiprofeto. (1 Kor. 3:9) Ukwakhiwa kweeofisi zamasebe ezininzi, amakhulukhulu eeHolo zeNdibano, namashumi amawaka eeHolo zoBukumkani emhlabeni wonke, kububungqina obungenakuphikiswa bokuba uBukumkani bukaThixo sebulawula. Sisikelw’ enqatheni ngokwenene ngokuba ngabasebenzi bakaKumkani uYesu Kristu, sisenza umsebenzi onika uYehova uzuko olumfaneleyo!
^ isiqe. 6 Ngo-2013, iiKomiti Zokwakha Zenqila eziyi-132 zaseMerika zafumana amatsha-ntliziyo angaphezu kwayi-230 000 ukuze ancedise kulo msebenzi mkhulu. Nyaka ngamnye, ezi komiti ziye zanceda ekwakhiweni kweeHolo zoBukumkani eziyi-75 nasekulungisweni kwezinye ezimalunga neziyi-900.
^ isiqe. 9 Kula manani, iiHolo zoBukumkani ezakhiwe kumazwe angekho kweli phulo azibalwanga.
^ isiqe. 16 Kukho abazalwana abasuka kumazwe ngamazwe namatsha-ntliziyo achitha ixesha elininzi esebenza esizeni, kodwa ayalixhasa nebandla ngokushumayela nalo ngeempelaveki nangamarhatya.
Kutheni sisakha iiholo neeofisi zamasebe?
Umsebenzi wethu wokwakha umzukisa njani uYehova?
Yintoni esinokuyenza ukuze sixhase umsebenzi wokwakha nowokulungisa iindawo zethu zokunqula?
Abantu bakaYehova abohlulwa yimida yamazwe, indlela abakhuliswe ngayo okanye iilwimi kodwa baqhubeka besakha iiHolo zoBukumkani nezinye izakhiwo ezizisa uzuko kuYehova.